Munaasabad lagu xusayay dhalashada nabigeenna Muxamad NNKH oo lagu qabtay Magaalada Tromsø + Sawirro. | Maanta Online
Home / Islam / Munaasabad lagu xusayay dhalashada nabigeenna Muxamad NNKH oo lagu qabtay Magaalada Tromsø + Sawirro.
Munaasabad lagu xusayay dhalashada nabigeenna Muxamad NNKH oo lagu qabtay Magaalada Tromsø + Sawirro.
Posted by: admin in Islam, Wararka December 12, 2016	Comments Off on Munaasabad lagu xusayay dhalashada nabigeenna Muxamad NNKH oo lagu qabtay Magaalada Tromsø + Sawirro. 606 Views
Munaasabaddan oo ay soo qabanqaabiyeen culumaa,udiinka ku nool magaalada Tromsø ayaa waxaa si wayn uga soo qeyb galay dad aad u farabadan oo kamid ah muslimiinta ku nool magaalada iyo tuulooyinka ku dhow waxaana munaasabadda lagu soo bandhigay muxaadarooyin diini ah oo u badnaa ka hadalka fadliga ay leedahay xurmeynta iyo weyneenta bisha mowliid oo ah xilligii uu dhashay nabigeenna Muxamad SCW.
Culumaaudiinkii goobta ka hadlay oo ay kamid ahaayeen macalim maxamed Axmed, Sheekh Ismaaciil Macallim Axmed iyo Macalim Saalax Cusmaan ayaa ku guubaabiyey ummada soomaaliyeed iyo dadkii kale ee kasoo qeybgalay in muhim ay tahay in lagu daydo sunnada nabigeenna suubban oo aad loo xuso maalinta uu dhashay taasoo muujinaysa jaceylka ay dadkiisa u qabaan rasuulka SCW.
Waxa sidoo kale ay culumada aqriyeen taariikhdii nabigeenna csws iyo doorka qofka muslimka ah looga baahanyahay fidinta diinta islaamka oo ah diin nabadeed, munaasabadda ayaa ugu dambeyntii kusoo gebogebowday jawi aad u wanaagsan.
Bisha mowliid sanad kasta waxaa dunida laga xusaa xilligii uu dhashay nabigeenna suubban Muxamad csw waxaana ay dadweynaha muslimiinta ah ay iyagoo faraxsan isugu soo baxaan masaajidada iyo goobo kale oo loo asteeyey in lagu xuso 12ka bisha mowliid.
Previous: Somalia: Car bomb leaves at least 20 dead
Next: Madaxweyne Axmed Madoobe oo sagootiyay xildhibaanada Baarlamaanka ee Jubaland u matalaya + Sawirro